Waxyaabaha '7' waxaan xusi doonnaa bandhiga - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Waxyaabaha '7' waxaan ku xusi doonnaa bandhiga - dadka
Waxyaabaha '7' waxaan xusi doonnaa bandhiga - dadka
Riix halkan haddii ay dhibaato kaa haysato daawashada sawirada qalabka mobile .
Iron Maiden wuxuu soo bandhigay waxsoosaarkiisa aadka u sarreeya ee waqooyiga Kaliforniya, Legacy of the Beast, taageerayaashooda. Sebtember 9 ee Xarunta Dahabiga ah ee Sacramento ka dibna Sebtember 10 ee Oakland Arena.
Waa kuwaan qaar ka mid ah daqiiqadihii / waxyaabaha ka dhigay in Oakland muujiso xusuus aad u wanaagsan
Codkii Bruce Dickinson
Waa mid ka mid ah fannaaniinta ugu awoodda badan taariikhda birta culus - laga yaabee xitaa inuu ku dhegan yahay Ronnie James Dio booska koowaad ee liiskan. Oo isagu weli wuxuu ku sii socdaa xoogga 2019, isaga oo dhex maraya liisaska heesaha 16 oo ka bilaabaya "Aces High", "Halkee Eagles Dare" iyo "Daqiiqadaha 2 illaa Saqda-Dhexe".
Dabeecadda cad ee Dickinson
Kama baqayo inuu dhiibo aragtidiisa, in kasta oo laga yaabo in uusan u mahadcelinin taageerayaasheeda qaar. Tusaale ahaan Oakland, wuxuu dadka ka dhaadhiciyey qatarta ay leedahay cawska sigaar cabista - hal mar, laakiin labo jeer.
"Waan ogahay waxa marijuana ay maskaxdaada ku qabato," ayuu yidhi. "Taasina ma fiicna."
Weerarka saddexda guuto
Bandhadyada badankood waxay nasiib u leeyihiin inay heystaan ​​guitarist aad u fiican. Maiden, dhiniciisa, wuxuu leeyahay seddex: Dave Murray, Adrian Smith iyo Janick Gers, kuwaas oo ku soo biiray xoogagga heesaha sida "The Trooper" iyo "Aces High" ee Oakland.
Waxaa jiray waxyaabo badan oo qabow iyo saameyn badan oo taxanaha ah, oo ay kujiraan Supermarine Spitfire - diyaarad dagaal oo Ingriis ah oo loo adeegsaday intii lagu jiray Dagaalkii Labaad II - oo u duulay madaxdii xubnaha kooxda intii lagu jiray. ciyaarta riwaayadda koowaad ee cinwaankeedu yahay "Aces HIgh".  Alaabada
Sida iibsadaha kulul ee Mawduuca kulul u dhahayaa qofna uma qalmo sida Iron Maiden. Kooxda ayaa ku iibin jirtay maaliyado 10 $ 45 (oo lagu daray shaati gacmo dheere ah oo loogu talagalay 75 $) oo ku yaal dukaanada ganacsiga ee Oakland. Waxaana suurtogal ah inay jiraan tiro ka mid ah taageerayaasheeda oo u baahnaa inay dhammaantood haystaan.
Orod ordayaasha ah
Waxaa jira tartamo badan oo loogu talagalay cinwaanka heesta birta ee ugu weyn abidkeed. Laakiin midkoodna kama wanaagsana gabaygan gabay taxanaha ah.
Inta badan waxaa loo hibeeyay kuwii hore ugu jeclaa taageerayaasha, iyadoo keliya labo ka mid ah xulashooyinka qarnigan la qabtay. Waa tan waxa ay ciyaareen, iyagoo ku saleynaya qoraaladayda iyo macluumaadka 'setlist.fm:
2, "Halkee Eagles Dare"
3, "2 Daqiiqo illaa Saqda Dhexe"
7, "Wixii wanaagsan ee Ilaah"
8, "Ninka garabka daran"
9, "Calaamadda iskutallaabta"
10, "Duulista Icarus"
11, "Cabsida mugdiga"
12, "Tirada bahalka"
13, "Iron Maiden"  Mar labaad:
14, "Dhibaatada ay ragga u geystaan"
15, "Magac ha laga dhigo quduus"
16, "Orod xagga buuraha"
Dadka: Laeticia Hallyday way niyad jabtay: In kasta oo ay jiraan mucaaradad, taageerayaashu way taageersan yihiin Jean-Baptiste Guegan, codkii Johnny ee labanlaab